UTM iququzelela kumazantsi e-hemisphere-Geofumadas
Ikhaya/Iiphotography/I-UTM idibanisa kwisezantsi
Ukuphendula kwi isicelo esenziwe nguAnahí ukusuka eBolivia ndenze ifayile equlethe imimandla ye-UTM yaseMzantsi Melika, enokuba luncedo kakhulu kwiinjongo zemfundo, nangona ndincoma ukufunda isithuba "ukuqonda ukulungelelaniswa kweUTM".
Ngokuvula ifayile usebenzisa iGoogle Earth, ukubandakanywa kweendawo ze-UtM kungachazwa lula kwiklasi.
Ukubona iindawo ze-UTM, yenziwa "kwiZixhobo / iinketho / umbono we-3D" emva koko kwibala elithi "bonisa lat / elide", khetha "i-Universal Traverse Mercator"
Ukubonisa igridi, yenza "umbono / igridi" okanye uCTRL + L
Ke sinokubona ukuba amazwe asezantsi ezikone akule mimandla ye-UTM:
Brazil: ukusuka kwi-18 ukuya kwi-25
Iimeko ze-Ecuador zikho kwiindawo ze-17 kunye ne-18, kodwa ngeeqendu ezikumantla ezisentla nakumazantsi.
IColombia iphakathi kwe-17, i-18 kunye ne-19 kwaye ikwazo zombini i-hemispheres
I-Venezuela ingowokuphela kweentlanga, phakathi kwe18, 19, 20 kunye ne-21
kunye neeGuyan naseSuriname ziphakathi kwe-20, i-21 kunye ne-22
Umfanekiso wokugqibela ubonisa iBolivia, ekhoyo phakathi kweendawo ze-19,20 kunye ne-21; indawo ephawulwe ebomvu ngumzekelo ocacileyo wolawulo olukwindawo ye-19, eLake Poopó kwaye eneendawo eziqhelekileyo kunye ne-latitude kwi-20 kwinqanaba laseGran Chaco.
Apha unako khuphela ifayile ye-kmz, onokuyivula ngeGoogle Earth:
Ukuba unomdla wokuba nayo yonke imimandla, kule khonkco ilandelayo ungathenga ifayile equlathe yonke imimandla ye-UTM. Kubandakanya imimandla:
unokufumana ngekhadi lesikweletu okanye i-Paypal
Alvaro Calderón uthi:
Ukubingelela ngokubaluleka kwamkelwa ngu-Ing.
Ndiyabulela, iingcinga zakho zibaluleke gqitha.
Ndibhala njani uququzelelo 699051.00 10116907.00 ebekwe kwicandelo leRioverde canton, kwiphondo le-Esmeraldas, e-Ecuador
WILSINTON ORTIZ uthi:
Molo, ndibona umdla kakhulu, isihloko seGlobal Mapper, ndingathanda ukwazi ukuba ndibona njani ukuba yeyiphi indawo enomdla ebekwe eColombia. Enkosi
UJoseph Irrazabal uthi:
Sisebenza eParaguay Chaco phakathi kweedigri ezingama-60 kunye nee-62 degrees zobude kunye ne-22 degrees ye-latutud. kufutshane kakhulu notshintsho lommandla phakathi kwama-21 nama-20, kodwa kungaphelanga iminyaka engama-20. Senze iphulo lokwaba uququzelelo ngeSatellite GPS yamanqaku malunga nama-3.000 eemitha ukuqelelana. Ngokunxulumene noko kumanqaku afanayo esiphelo siwenzile umjikelo (sivale) i-polygonal nesitishi esipheleleyo, sanyanzelisa i-1 / 25.000 kwiplanethi kwaye sikwazile ukuvala i-polygonal ngaphakathi konyamezelo. Ukuthatha njengesiseko esinye seengongoma ezibi kakhulu kwaye sibabela ulungelelwaniso lweGPS kunye nokubala uququzelelo lwenqaku elilandelayo eligqithisileyo kunye nedatha yee-engile kunye nomgama wokuhamba kwethu okwenziwe ngesitishi esipheleleyo kwaye sinokuthenjwa kakhulu njengoko kuchaziwe apha ngasentla, asifumani Umahluko usondele kwimitha enye phakathi kokudityaniswa okubaliweyo kunye nezo zifunyenwe yiGPS, ndicinga ukuba lo mahluko mkhulu kakhulu. Ukuba umntu ebenokundixelela ukuba ndingayisombulula njani le ngxaki.
Ikhasi elihle kakhulu
Mhlawumbi indawo efanelekileyo yokufumana ulwazi kunye nobubanzi yiForam yeCartesia, kwiCandelo lePropati kunye neCadastre apho kukho ebhaliweyo malunga nalo.
LUIS CARPIO MONTES uthi:
KAKHULU uxabiso 'umdla, enkosi ngoncedo lwakho. Kodwa mna ndinga wemba kancinci ekuthethwa ngayo, Zibe UBHALISO yesakhiwo PHAMBI UNYAKA 70 IS TO kuphela umzobo Oyika amcaba Umjikelezo kuboniswana NGOKU IZICWANGCISO NGOKU LOKUSEBENZA Linxibelelanisa UTM, ngoko INGXELO MI PREDIO ngenxa yezizathu X HAYI ngokudibene esayiniweyo nabamelwane ngexesha eyenzekayo Review CATASTRO ME wathi wabangela okanye kongezwe kwi PREDIO elisecaleni okufanayo njengoko ababhalise PHAMBI FILE TO nGOKUTSHA FIND A indiza Ukuququzelela okufanayo kungangqinelani NGOKU Ukulungelelanisa KUTHENI abe KUMMANDLA uQOBO NAMANYATHELO iperimitha kODWA athe asuswa NGABA ELI nezompleyini, asikwam KUBA IT-manani ONGAKUMBI, wayencokola esine presonal CATASTRO ME BONISA UKUBA ukusombulula le ngxaki Uhlaziyo kufuneka CATASTRO IIREKHODI KUZO ZONKE AMAZWE zikarhulumente ELIBHALISIWEYO ANTERIORID AD cadastre ENTSHA, NGOKU Kufuneka ndazi KAKUHLE INDLELA sizisombulule kwamanye amazwe KUNYE INYANISO bendiya kuba nombulelo ezingenakuphela Hambisa KUMMANDLA INGQIQO eyalekeneyo, Graphic ukulinganisa, kutheni kufumana theory kakhulu ngalo mbandela. NGOKU UBUSAZI Ingakanani inkcazelo efunekayo ithisisi. ENKOSI noThixo undisikelele.
Kwimeko nayiphi na into, ukubhaliswa kwepropati entsha kuthintela ijometri enye ibhalisiwe, akukhathaleki ukuba ikulinganiswe ngokuchaneka okanye ngaphaya kokuchaneka, kufuna ukuba utshintsho apho abanikazi bobabini bamele bacaciswe khona.
Ngokuqinisekileyo inkqubo yokubhalisa iya kubonisa, ukuba ngumcimbi wokulinganiswa kwakhona kokubini kunye nokulungiswa kwamanyathelo ukususela ekuqinisekiseni ukuba kwakukho ingxaki yokulinganisa ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuhlola okanye ingxabano yokuhlala phakathi kokubili.
Siyabonga ngale ngcaciso enomdla.
Ndiyifumanisa yam phezu kwendawo echaphazela ukubhaliswa kwezakhiwo kwi-Arequipa yeSUNARP. 2010-2011
Kuyimeko yokuba ngoku izicwangciso zisetyenzwa kwii-UTM kunye nokulungelelaniswa kwe-COFOPRI, iqumrhu elijongene nokukhupha izatifikethi ze-cadastral zobhaliso lwabo kwiiRejista zikaRhulumente kunye nexesha lokufumana isiqinisekiso kwiiRejista zikaRhulumente zeArequipa bandixelela ukuba Inxalenye encinci inendawo edibeneyo yepropathi, kwaye kwaye bayandazisa ngokuqwalaselwa apho malunga nokuba amaxwebhu abonisiweyo ayonganyelwe kunye nepropathi edibeneyo esele ibhalisiwe kwi-cadastre yezemali, enye leyo ibingalungiswanga kulungelelwaniso lwe-UTM, umbuzo ngowokuba ungayisombulula njani le ngxaki ngaphandle kokulungisa indawo kuba andinguye umnini wenye ipropathi ngokuxhomekeke ekugqagqaneni, kuya kuba yimfuneko ukuvuselela i-cadastre esele ibhalisiwe. NDICELA NDITUMELE ISIKHOKHELO SENKCAZO YOKUQIKELELA KWINDAWO KUNYE NESONA SISombululo SINOKUCHANEKA KWINGXAKI YOPHANDO. ENKOSI
Yaye yeyiphi inkqubo oyisebenzisayo? phantse nayiphi na inkqubo ye-GIS ingakunceda ubeke izilungelelaniso kwimida yesakhiwo.
Ukuba uphando lwenu lukwimimandla emibini, kuya kufuneka ubonise umda.
Ukuba ufuna ukuguqula izilungelelaniso, ungasebenzisa le template onokuyenza ukuguqulwa kweendawo kwi-UTM ngomsebenzi wakho.
JOSE CRUZ uthi:
Ndingumcebisi kule ndawo ngenxa yokuba kuyamangalisa, kangangokuba ndingazange ndikwazi nokuba kukho iindawo ezinjalo.
Ndingathanda nokwazi ukuba ngaba kukho inkqubo okanye ifomula yokutshintsha ukusuka kumda we-17 uye kummandla we-18 ...
Lo msebenzi wandibuza njengomboniso wangaphambili wezobugcisa kwi-MEN.
Ndiyabonga abahlobo ngokuphendula kwakho kwangaphambili.
Kuhlekisa ukwazi ulwazi oluninzi nawe ..
Kodwa ndifuna ukunceda abahlobo ... Ndifuna ukwazi ukuba ndingasibonisa njani isicwangciso sam sophando esichanekileyo phakathi kweZone 17 kunye ne-18 ... kuba kufuneka ndiyibonise ebonisa imimandla kwaye kwangaxeshanye kuya kufuneka ndibeke uququzelelo kwicala lomzobo ...
Ndiyakuvuyisela nge-Apollo yakho kuwo wonke umntu kweli candelo le-geodesy elincomekayo namhlanje namhlanje
humbrto obando ukusuka lima - peru
Ndiyathanda ukwazi indlela yokuguqula ukusuka kwiplani edibeneyo okanye yezolimo kwi-XMUMX zone peru
Ikhonkco ebonakala ekupheleni kwesi sithuba, ikuvumela ukukhuphela zonke iindawo zephondo elikusezantsi kwifomati ye-kml, unokuziguqula ukuya kwi-shp nayiphina inkqubo ye-GIS njenge-ArcGIS okanye i-gvSIG.
into endiyifunayo ngumda wale mimandla ngakumbi iPeru…. Ndifuna umda wale mimandla (17,18, 19 kunye XNUMX) kwifomathi yefomathi .... Ndiyabulela kwangaphambili kuye nabani na onokundinceda
Tito Bam uthi:
Ndiyakuvuyela ngokugcina le ndawo ezinikele kulolu hlobo lwezihloko,
Ndiyiluncedo kakhulu iminikelo yakho.
Ndixolele ngenxa yokufuna "ukuthatha inzuzo" yolwazi lwabo, kodwa ndifuna ukuguqula iifayile ze-AutoCAD .dwg kuhlobo lwe-KML, ukuze ukwazi ukulujonga ngolu hlobo kwi-GOOGLE EARTH
Xa usenza uphando site umz Venezuela Guárico karhulumente kunye uhambo lwaqala kummandla 19 kunye isikhokelo iyatshintsha 20 xa umzobo indawo kukho utshintsho uququzelelo ka ngaphezulu okanye ngaphantsi kwe 500.000 600.000 ukuya leemitha bebodwa. Umbuzo yindlela na Balungisa ukuba desplasamientopara ukuba xa umzobo nokulungelelanisa amanqaku ayahlukanga okanye ifomula ukusebenzisa ulungiso ukuya moya iingongoma ezivumelana?
umz: ICONORDINATES N-1041699.00-E-170555.00 ZONE 20
IINKCUKACHA N-1041706.00-E-829452.00 ZONE 19
I-Venezuela, phakathi kwe-18, i-19, i-20 kunye ne-21
Ndifuna ukwazi ukuba iindawo ze-utm zaseVenezuela zinjani.
Hi Katya, andiyiqondi loo mbuzo wakho.
Iiparameters ze-19 kumzantsi?
Sawubona uJimmy, ukubeka i-UTM izilungiso, ndincoma ukuba usebenzise Plex.mark , isisicelo esiluncedo kunye nesiluncedo.
Ukuba uthetha ukutshintshela ukubonakala, ukuba ungaboni i-coordinated geographical or utm, kufuneka wenze ntoni uyitshintshe kwiinketho
Umahluko onokubonwa awukho kulungelelwaniso, kodwa kwimifanekiso. Ukucoca iimpazamo phakathi kwemifanekiso zibonisa ukungabonakali owona mfanekiso weGoogle Earth, ngoko ulungelelaniso luchanileyo kodwa umfanekiso uhamba.
UJimmy Diaz uthi:
Ndiyabulela x i-rpta yakho, ndingathanda ukwazi ukuba ungayifaka njani uphawu ngokusebenzisa i-UTM izilungiso, kuba ngokungafihlisiyo kuzisa ukulungelelaniswa kweendawo,
Ukukwazi ukukwazi ukuzenza i-GIS program.
Kwakhona usebenzisa ezinye iinguqulelo zokuguqula ukusuka kwiiyure ukuya ku-UTM ngokungafani kakhulu nento eboniswa kwiGoogle emhlabeni, kuba?
Ndiyabulela kuwe kuba undiphendule ngokukhawuleza kangaka, kodwa sekunjalo uthandabuze ingaba oko kunto-nye njengoko ifunyenwe kwi Google Earth nguye. Okt ukuba Google Earth Leo, 18 H 673570 5921730 m m E // S, ndingatsho akukho iingxaki H 18 673570 Indlela // 5921730 m m E N?, Okanye wenze kusafuneka ndenze ntoni na inguqu ethile?.
Ndiyabulela kakhulu ixesha lakho.
Eqinisile, kuMntla noMpuma, kodwa kuyaqondwa ukuba kusemzantsi weHlabathi
Umbuzo, e-Chile UTM North kunye neMpuma ukulungelelaniswa kucelwa ukuba ubeke ingongoma, kodwa ukuba ndiyabona kwiGoogle Earth, i-coordination ivela njengo-S no-E. Ngaba enye okanye kufuneka wenze ukuguqulwa?
Ngaphambili, siyabonga kakhulu.
Tshela utitshala ukuba atshintshe umsebenzi.
GLG200 P1 uthi:
Kulo lonke iqela le-aranibar yangena apha ukuze ithathe umsebenzi wokuncedisa ukubatshela ukuba ayicacile hahaha
Ndiyabulela inkulungwane ibububuxoki inyaniso. Abazi ukuba banceda ntoni na. Ndiyabonga
Izilungelelaniso zilungile, ziphi na iimpazamo umfanekiso wesathelayithi ongaphezulu kwee-mitha ze-30, ke kutheni uphando oluchanileyo aluhambelani naloo datha.
ukulungelelaniswa kwiGoogle emhlabeni basuswa, abayikho
Sawubona, siyabonga ngencazelo.
uya kwiGoogle emhlabeni, ubhala mar de huacho, peru
Emva koko uhamba kwindawo leyo eyakuthandayo kwaye ufunde izicwangciso ezingezantsi
ALICIA ROJAS LOAYZA uthi:
Ndifuna iikholeji ezide. kunye nobubanzi, ukusuka elwandle lwaseHuacho (PERU)
Enkosi, ukulungiswa kuyaphumelela. Sele ndilwenzile uhlengahlengiso oluyimfuneko.
I-Peru ifumaneka kwi-17, i-18 kunye ne-19. Kukho impazamo nento oyipapashileyo.
Inxaxheba elungileyo kubo bonke abafuna olu hlobo lwazi. Siyabonga.
ukungena kwiGoogle emhlabeni, bhala ukuba kwi-injini yokukhangela, uze uchonge indawo apho ucinga ukuba indawo
Ndiya kufuna i-Long coordinates. kunye ne-latitude, yeziko elikufutshane leCAMPO CLARO (iTarragona)
Yeyiphi into entle, ubuqili obukhulu bokumisela ... ndichithe iiyure ndikhangela iimephu kwi-UTM ngesisombululo esihle ...
Imephu yokuqonda imbonakalo yomhlaba: UJuan Nuñez Girado